Muungaab: Toos ayuu u bilowday howlgalka lagu soo celinayo hantida la kala heysto – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Toos ayuu u bilowday howlgalka lagu soo celinayo hantida la kala heysto
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisa toos u bilaabay in dadka heysta guryaha aysan laheyn xoog looga saaro.
Jen. Muungaab oo ka hadlay barnaamij ka baxa Raadiyowga dowladda Soomaaliya ayaa xusay in maamuliisku bilaabay fullinta ballanqaad uu horay u sameeyey oo ahaa in dib loogu celiyo dadka hantida laga heysto.
“Waxaa toos u bilowday qorshaha dad heysta hantida aysan laheyn dib looga wareejinayo, waxaana la burburriyey dhismayaal fillooyin iyo Hoteello ah oo ku yaalla, Hiliwaa, Kaaraan iyo KM4” ayuu yiri Jen. Muungaab.
“Meelaha la burburriyey maaha hotel Bakiin oo kaliya ee waxaa ilaa 40 dhisme oo filooyin ah laga dumiyey jidka 30-ka ee dhex mara Kaaraan, kaasoo la dhistay 20 Mitir oo ka mid ah, sidoo kale waxaa filooyin laga dumiyey degmada Hiliwaa” ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in dhibaatada ka jirta hantida la kala heysto u qeubsan tahay labo qeybood oo ah: qeyb xoog lagu heysto iyo qeybo lagu muramsan yahay.
“Muranka ka jira hantida la kala heysto waa labo qeybood, qeyb xoog lagu kala heysto, hantidaas dadka heysta xoog ayaa looga wareejinayaa, qeybta kalan waxaa ka jira muran ah ‘aniga ayaa leh iyo aniga ayaa leh’ ama ‘ama waa iga gatay iyo igama gadan’, qeybtaas maxkamadaha iyo guddoga cadaaladda gobolka ayaa la horgeynayaa” ayuu Muungaab.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in hantida la kala heysto ee Muqdisho ay aad u yartahay, wuxuuna dadka ugu baaqay iney maamulka soo wargeliyaan haddii hanta laga heysto.
“Hadda hantida la kala heysto waa mid yar, anna howlgalkeennuna wuxuu ku xiran yahay inta nagala soo wagelinayo” ayuu yiri Muungaab.
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa maamulka gobolka Banaadir dhulka la simay dhismayaal farabadan oo laga dhistay qeybo badan oo ka mid ah laamiga dhex mara degmada Kaaraan.
Sidoo kale, maamulka gobolka ayaa burburriyey qeybo ka mid ah hotel caan ka ahaa Muqdisho, kaasoo xoog lagu heystay sida la sheegay, islamarkaana dhistay dhul danguud oo dowladd Hoose laheyd.
The National Unity Party felicitates the nation on Somali Independence Week and calls for national reflection and atonement
Kenyan badan oo ka barakacay deegaano Alshabaab weerareen oo ka tirsan Laamu